Mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo ansixiyey 4-tii xubnood ee Guddiga Doorashada. – Radio Daljir
Mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo ansixiyey 4-tii xubnood ee Guddiga Doorashada.
Luulyo 3, 2011 12:00 b 0
Garowe, Jul 03 – Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa fadhigoodii maanta ka dooday ansixinta afar (4) xubnood oo ka mid noqon doona Guddiga Doorashada ee Puntland oo uu shalay magacyadooda iclaamiyey afhayeenka baarlamaanku iyo tiro wasiiro iyo ku xigeena ah oo dhawaan is-badel lagu sameeyey.
Md. Xirsi oo tafaasiil ka bixiyey sababaha ay ku xusheen 4-ta xubnood ayaa sheegay in ay xeeriyeen aqoonta, kartida, waaya-aragnimada, iyo sumcada xubnaha ay soo xuleen, iyada oo la xeerinayo 8-da gobol ee ay Puntland ka kooban tahay.
Hawsha ugu horaysa ee uu Guddiga Doorashadu bilaabi doono ayaa ah afti u qaadida dastuurka Puntland, hirgelinta axsaabta siyaasadeed, iyo qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka, mudanayaasha baarlamaanka & madaxda dawlada Puntland.
Dood ayaa ka dhalatay habka magacaabida xubnaha oo qaar ka mid ah mudanayaashu ay ku eedeeyeen afhayeenka baarlamaanku in aanu kala tashan mudanayaasha baarlamaanka, uuna gaar ahaan u magacaabay 4-ta xubnood.
Afhayeen C/rashiid M. Xirsi ayaa garawsaday, raali-gelinna ka bixiyey eedaynta uga timid mudanayaasha golaha, sheegayna in uu wadi tashi la sameeyey guddiga joogtada ah ee golaha, uuna la tashi la samayn doono mudanayaasha wixii hadda ka dambeeya.
Mudanayasha baarlamaanka ayaase doodda ka dib cod aqlabiyad ah kalsoonida ku siiyey 4-ta xubnood ee uu goluhu magacaabay.
Golaha ayaa sidoo kale ay tahay in uu ansixiyo 5-tii xubnood ee uu hore u magacaabay M/weyne Faroole si ay u bilaabaan hawsha dastuuriyan loo xil saaray.
Xubnaha Guddiga Doorashada Puntland:
1. Dr. Cali C/raxmaan Xirsi,
2. Yuusuf Xaaji Saciid,
3. Maxamuud Soofe Xasan,
4. C/risaaq Axmed Sheekh.
5. Maxamed Xasan Bare,
6. Barkhad Cali Saalax,
7. Cismaan Maxamuud X. Xasan,
8. Axmed Maxamuud Axmed,
9. Muxubo Muuse Ciise.
Xaaladda deegaanka Dhag-tuur ee gobolka Mudug oo deggan iyo khasaaraha labada dhinac oo sii kordhaya.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo magacaabay afartii xubnood ee ka dhimmanaa guddiga doorashada Puntland.